विदेशी भाषाहरू सिक्न भाषा कार्डहरू स्वयं-अध्ययनको सरल र सबैभन्दा साधारण विधि
विदेशी भाषाहरू सिक्न भाषा कार्डहरू स्वयं-अध्ययनको सरल र सबैभन्दा साधारण विधि हो। एक पक्षले कठिन शब्द राख्दछ, र अर्को पक्ष यसको अर्थ वा अनुवाद छ।
कार्डहरूको डेक ड्राइंग गरेपछि, तपाईंले कार्ड हेर्नु भएको छ, तपाईले पहिले नै सिकेका कुराहरूलाई बिस्तारै सेट गर्नुहोस्, जब सम्म तपाईंले सम्पूर्ण डेक जान्नुभएन।
10,000 नयाँ शब्दहरु लाई सम्झना र उनको भाषा अभ्यास मा प्रयोग गरेर, म मेरो प्रक्रिया को एक कहानी लिख सकते हो, जसलाई म आशा गर्दछ कि तपाईं एक अधिकतम समय र कम त्रुटिहरु संग अधिकतम दक्षता संग एक नै बाटो को पार गर्न मा मदद गर्न सक्छन्।
पहिलो, मैले आफैलाई अंग्रेजीमा 500 भन्दा बढी प्रयोग गरिएका शब्दहरू सिक्ने लक्ष्य र अनुसन्धानको आधारमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरिएका शब्दहरूको तथ्याङ्क पत्ता लगाएको छु।
यी शब्दहरूको सूची संकलन गरी, मैले डेकमा विभाजन गर्न र तिनीहरूलाई सिक्नका लागि कागज भाषा कार्डहरू सिर्जना गर्न थाले।
जब लक्ष्य हासिल भयो, मैले एनालिभ्सको अंग्रेजीको सभ्य ज्ञानको लागि, तपाईंलाई कम्तिमा 5,000 बिभिन्न शब्दहरू थाहा पाउनुपर्दछ।
धेरै हजार कागजी कार्डहरू प्रयोग गर्ने स्पष्ट असक्षमताले मलाई यस उद्देश्यको लागि उपयुक्त मोबाइल अनुप्रयोग विकास गर्न धक्का दिए।
अधिकतम परिणाम प्राप्त गर्न कुञ्जी प्रकार्यहरू निर्धारण गर्न आवश्यक थियो। यसकारण, अनुप्रयोगको विकास सुरु गर्नु अघि मैले प्रकार्य र आवश्यक उपकरणहरूको पूर्ण सूची संकलन गरे:
1. कार्डहरूको असीमित संख्या सिर्जना र भण्डार गर्न क्षमता
2. भण्डारण र सिकेको सामग्री को मात्रा को विश्लेषण को लागि पुरालेख
3. तपाईंको आफ्नै शैक्षिक सामग्री बनाउनका लागी स्वचालित कागजातहरूको कार्डको साथ पाठ कागजातबाट कुनै डेटा डाउनलोड गर्न क्षमता
4. स्वचालित रूपमा सबै कार्डहरू भ्वाइस आदेशमा भ्वाईस, समायोज्य पुनरावृत्ति दर र अडियो प्लेयर प्रयोग गर्नका लागि प्रकार्यहरू कुनै पनि समयमा अध्ययन सामग्री सुन्नको साथ
5. जीवनका विभिन्न पक्षहरूमा विषयगत डेटाबेस सिर्जना गर्नुहोस्
6. चित्रहरूसँग भाषा फ्लैशकार्डहरू दृश्यहरूसँग संघहरू सिर्जना गर्न
7. इन्टरनेट बिना वा हवाई जहाज मोडमा
8. सबै सजिलो शब्दका लागि क्लाउड स्टोरेज
9 प्रयोगको सादगी
10. शब्दहरू याद गर्ने अनुकूलन दैनिक अभ्यास
11. अनुसूचित अभ्यासहरूको अधिसूचना
12. कन्फिगर योग्य शब्द क्रम क्रम
13. डेटाबेसमा कार्डहरू स्थान्तरण गर्दै
14. कुनै पनि विदेशी भाषाहरू र धेरै भाषाहरू सिक्ने क्षमता पाउन
लक्ष्य निर्धारण गर्न, मैले सक्रिय रूपमा नयाँ उत्पादन सिर्जना गर्न थाले।
एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमको लागी विकासशील अनुप्रयोगहरूको सानो अनुभव गरिसकेपछि, मैले मेरो स्मार्टफोनको लागि LingoCard को पहिलो संस्करणमा काम गर्न थाल्नुभयो र केही महिनामा पहिलो मोबाइल अनुप्रयोग भाषा कार्ड र एक डेटाबेस (एक डेक कार्ड) तयार थियो। थप जटिल उपकरणहरू विकास गर्न मैले मैले पाएको व्यावसायिक विकासकर्ताहरूको साथ कार्यान्वयन विकल्पहरूमा छलफल गर्न थालें। मानिसहरूले मेरो विचार मन पराउँथे र परिणामस्वरूप उत्साही प्रोजेक्टमा सामेल हुन थाले। हाम्रो विचारहरू लागू गरेपछि, हामीले दुई अपरेटिङ सिस्टमहरू: एन्ड्रोइड र आईओएसको लागि धेरै अनन्य उपकरणहरू रोक्न र विकसित गर्न निर्णय गरेनौं। हामीले Google Play र Apple Store मा नि: शुल्कका लागि हाम्रो अनुप्रयोगको होस्ट गरेका छौं।
धेरै महिनाको लागि, विश्वभरका दसैं हजारौं व्यक्तिहरूले कुनै पनि शुल्क बिना हाम्रो अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्न थाल्नुभयो, हामीले धेरै धन्यवाद-पत्र-संकेतहरू-गल्ती-पत्रहरू र सुझावहरू कसरी सुधार गर्नका लागि उत्पादन पाएका छौं, जसको लागि हामी आभारी। परिणामको रूपमा, हामीसँग धेरै कार्यहरू र नयाँ विचारहरू छन्।
जब तपाइँ भाषा वातावरणमा विपरित हुनुहुन्छ, त्यहाँ त्यहाँ चाँडै वाक्यहरू सिर्जना गर्न क्षमताको आवश्यकता बुझ्छ। यो वाक्य र आधारभूत वाक्यांशहरूको बुझाइ हो जुन कुराकानीको लागि तपाईंको बोली स्वीकार्य र द्रुत अनुवादको लागि स्वीकार्य गर्दछ। त्यसकारण, यो वाक्यहरू, वाक्यांशहरू र मूर्खहरूको साथ कार्डहरू संकलन गर्न निर्णय गरिएको थियो। अब, हाम्रो अनुप्रयोगहरूमा तपाईंले सैकड़ों हजारौं भाषा कार्डहरू शब्दहरू र विभिन्न वाक्यहरूको गुच्छा पाउन सक्नुहुन्छ।
हाम्रो अनुप्रयोगमा सबै भाषा कार्डहरू पाठ थप्नको लागि कुनै सीमा छैन, त्यसैले यो तपाईंको मनपर्ने गीत गीत वा तपाईंको मनपर्ने पुस्तकहरूबाट अनुच्छेदहरू फ्लैश कार्डहरू सिर्जना गर्न सम्भव छ। धेरै पाठ थप्न पछि, तपाईं माथि वा तल स्क्रॉल गर्न सक्नुहुन्छ र भाषण सिन्थेसाइजरसँग सुन्न सक्नुहुन्छ।
Flashcards दुई मोडमा प्रशिक्षणको लागि उपलब्ध छन्:
1. कार्ड मोडको सूची, जहाँ तपाइँ सबै कार्डहरू एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ र डेटाबेस माथि / तल स्क्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक कार्ड फ्लप बटन ट्याप गरेर सीधा सूचीबाट फ्लिप गर्न सकिन्छ।
2. खुला कार्ड मोड। यहाँ तपाईं ठूलो पाठमा ठूलो पाठमा कार्ड खोल्न सक्नुहुन्छ र सबै कार्डहरू बाँया / दाँया स्वाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यस मोडमा, कार्डहरू सम्पादन गर्न सम्भव छ, तिनीहरूलाई सक्रिय र अध्ययन गरिएको डाटाबेसमा पठाउनुहोस्। संघीय “भिजुअल छवि” सिर्जना गर्न फ्लैश कार्डमा चित्रहरू र तस्वीरहरू संलग्न गर्न पनि सम्भव छ। प्रत्येक कार्डलाई अर्को तर्फमा पाठ क्षेत्रमा कुनैपनि ट्याप गरेर घुमाईएको छ।
अनुप्रयोग मेनुमा, तपाईं विभिन्न प्रशिक्षण मोडहरूको लागि धेरै सेटिङहरू पाउन सक्नुहुन्छ।
अध्ययनको लागि समयको कमीको समस्यामा काम गरौं, हामीले एक अनूठा अडियो प्लेयर सिर्जना गर्ने निर्णय गर्यौं जुन विदेशी शब्दहरू र तिनीहरूको अनुवादको बीचमा वैकल्पिक कुनै पनि क्रम र कुनै पनि सिर्जना गरिएका कार्डहरू आवाज गर्नेछौं। नतिजाको रूपमा, विदेशी भाषा कहीं र कुनै पनि समयमा संगीत सुन्नको लागि समान रूपमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। अब यो उपकरणमा प्रयोग हुने उपकरण र प्लेटफर्मको आधारमा लगभग 40-50 विदेशी भाषाहरू सुन्नको सम्भाव्यताको लागी कार्यान्वयन गरिएको छ। मलाई विश्वास छ कि केही समय पछि हाम्रो प्लेयरले ग्रहको सबै ज्ञात भाषाहरूको साथ काम गर्नेछ।
यो पनि शब्दहरू याद गर्न महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ, उदाहरणका लागि, वर्णमाला क्रममा, उल्टो वर्णमाला क्रम, अनियमित रूपमा, विषयहरूमा, आदि।
तपाईं हाम्रो उपकरणको साथ 67 विदेशी भाषाहरूको कुनै संयोजन अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको सबै Flashcards क्लाउड सर्भरमा भण्डारण गरिएका छन्, त्यसैले तपाइँ उपकरणहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँ भर्खरै तपाइँको इमेल र पासवर्ड सम्झनु पर्दछ।
नजिकको भविष्यमा, हामी देशी स्पिकरहरू र एक भिडीयो कन्फिगरेसन प्रकार्य खोज्नको लागी एक उपकरणको विकास गर्ने योजना बनाउँछौं, जसको साथ तपाई सम्पूर्ण वार्तालाप वा पाठमा नयाँ भाषा कार्ड सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ।
यसको अतिरिक्त, हाम्रो Flashcards को मदद संग तपाईं शब्द या वाक्य को सही उच्चारण अभ्यास गर्न सक्छन्। यो गर्न, हामी कार्यान्वयन र भाषण पहिचान संग उपकरणहरू विकास गर्दैछौं जसले तपाईंको उच्चारण सुन्नेछ र तपाईंको गल्तीहरू देखाउनेछ।
Leitner को प्रणाली प्रयोग गर्नुहोस्।
Leitner प्रणाली 1970 को दशक मा जर्मन विज्ञान पत्रकार सेबस्टियन लेइटनर द्वारा प्रस्तावित Flashcards को उपयोग गरेर कुशलतापूर्वक उपयोग को एक तरीका हो।
यो स्पेस पुनरावृत्ति को सिद्धान्त को एक सरल कार्यान्वयन छ, जहां कार्ड बढाव को अन्त मा समीक्षा गरिन्छ।
यस विधिमा Flashcards समूहहरूमा क्रमबद्ध गरिएका छन् अनुसार लाइटनर सिकाउने बक्समा सिकाउने प्रत्येकलाई कसरी राम्ररी थाह छ। सिकारकर्ताले फ्लैशकार्डमा लिखित समाधान सम्झन खोज्छ। यदि तिनीहरूले सफल भएमा, तिनीहरू अर्को समूहमा कार्ड पठाउँछन्। यदि तिनीहरूले असफल भएमा, तिनीहरू यसलाई पहिलो समूहमा पठाउँछन्। प्रत्येक सफल समूहको लामो समयको अवधि छ जुन सिक्न कार्डहरू पुन: प्राप्त गर्न आवश्यक छ। यो विधि विदेशी भाषाको शब्दहरू सिक्न र अन्य जानकारीको सम्झनाको लागि दुवै प्रयोग गर्न सकिन्छ।
तपाईं हाम्रो आवेदनको साथ लिट्नर प्रणाली प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। Flashcards धेरै समूहहरूमा सार्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, तपाइँ प्रशिक्षण सामग्रीलाई आवेदनमा लोड गर्नुहोस् वा केवल तयार-निर्मित शब्दकोश चयन गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाई कार्डहरू मार्फत जानुहुन्छ भने तपाई तिनीहरूलाई “अध्ययन” डाटाबेसमा सार्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईं तुरुन्तै गर्न सक्नुहुन्न भने डेकमा छोड्नुहोस्। तिनीहरूलाई सम्झनुहोस्, वा सबै भन्दा कठिन शब्दहरू सक्रिय डाटाबेसमा स्थानान्तरण गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाइँ पहिले पहिलो सक्रिय डेटाबेस पढ्नुहुन्छ, त्यसपछि चयन गरिएको र समय समयमा समय, अध्ययन डाटाबेसमा सिकेको सामग्री परिमार्जन गर्नुहोस्।
हाम्रो दिमागले बुझ्न किनकि यो किन नयाँ शब्दहरूको सम्झना चाहिन्छ र अनावश्यक जानकारीबाट छुटकारा पाउन कोसिस गर्दछ। यस समस्यालाई पराजित गर्न, हामीले यो मस्तिष्कमा शाब्दिक तवरमा बलियो बनाउन आवश्यक छ। केवल कल्पना गर्नुहोस् कि हजारौं शब्दहरू याद गर्न, तपाईंले धेरै सय हजार सिर्जना गर्नुपर्दछ वा तपाईंको सिरमा नयाँ तंत्रिका जडानहरू पनि चाहिन्छ! नतिजाको रूपमा, हामी निश्चित रूपमा स्मार्ट हुन सक्छौं।
यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नको लागि, हामी हाम्रो अनूठा सफ्टवेयर विकास गर्दैछौं कि मस्तिष्कमा नयाँ तंत्रिका जडानहरू सिर्जना गर्न एक ढङ्गले तुलना गर्न सकिन्छ – तपाईलाई मात्र सही सामग्री छान्नु र उत्तम परिणाम प्राप्त गर्न प्रयासमा राख्नुपर्छ।
Andrew Kuzmin 21.06.2018